Volana iankinan'ny ho avin'ny firenena (1)? | Hevitra MPANOHARIANA
Volana iankinan'ny ho avin'ny firenena (1)?
2010-11-05 @ 22:32 in Andavanandro
Ela sahady izay tsy nifampitafana teto izay na dia maro dia maro aza ny toe-javatra nitranga teto amin'ny firenena, na teto an-drenivohitr'i Madagasikara no marina kokoa. Mety ho liana tanteraka ianareo any ivelan'i Madagasikara any ka hiezaka aho ny hanentsina araka izay tratrako ny banga sy hitantara ny zavatra andavanandro tsy voalaza nefa mety hidika zavatra ihany amin'ny ho tohin'ny tantara.
Lanonana ho avy TEDxAntananarivo
Lanonana ho avy afaka fotoana vitsivitsy aloha no hambara etoana satria maro rahateo ny tanàna na firenena efa nandray na nanomana ity karazan-danonana iray ity. Sehatra hifampizarana izay mety hanatsarana ny ampitso eo amin'ny sehatra manerana izao tontolo izao, mba tsy hitoetra ho nofinofy fotsiny ihany io ampitso io fa misy tokoa ny hevitra tsara zaraina sy tanterahina. Tsy diso anjara amin'izany sehatra hifampivelarana izany isika Malagasy sy ny eto Madagasikara, hany ka misy ireo Malagasy sy vahiny vitsivitsy hitondra ny anjara birikiny sy hampandray anjara an'i Madagasikara ao anatin'ity sehatra iray ity. Ny TEDxAntananarivo no hotanterahina amin'ity volana novambra 2010 ity avy hatrany.
Sehatra malalaka dia malalaka izy io ary tsongoin'olom-bolo sy vato nasondrotry ny tany no tena iriana handray anjara. Na dia miteny aza aho eto hoe malalaka ny sehatra dia ataoko fa tsy dia tsara loatra na diso toerana raha iresahana politika na fivavahana ao satria tsy Antananarivo na Madagasikara irery no voakasika amin'ny tafatafa fa ny firenen-drehetra ihany. Tetikasa tsy miankina amin'ny fanjakana rahateo izy io ka fifanentanana tsy miankina amin'ny fanjakana no hisongadina. Mety hisy ny lahatsoratra manokana hataoko momba azy io fa ho fiomanana dia amin'ny 26 novambra 2010 no hanatanterahana azy ao amin'ny Garan'i Soarano ary ato misy lahatsoratra amin'ny teny malagasy tsara vakiana manazava dieny izao ny mombamomba azy.
Fefy fanitso manerana ny lalana
Hivadika tanteraka ny resaka eto fa dia ho politika sy fivavahana tsy misy idiran'ny TEDxAntananarivo amin'izay ny ankamaroan-dresaka. Na ahoana na ahoana dia hita taratra ny asan'ny kaominina Antananarivo renivohitra, na ny zava-bitany no marina kokoa. Efa noresahina ihany ny tetikasa 119, izay tokony hiainga amin'ny alalan'ny fametrahana Toeram-piatoana na toeram-piantsonan'ny fiara fitaterana misy ialofan'ny olona miandry bus. Ny voamarika eto an-tanàna aloha ny famefena sy fandravana foto-drafitrasa vitsivitsy heverina hananganana drafitrasa vaovao.
Hita izany manoloana ny Tsangambaton'ny Mpitolona tia tanindrazana Ambohijatovo (fitenitsika azy moa dia tsangambaton'ny MDRM). Faritra roa no misy fanitso eo ary ny iray kosa nolamahina dia ny manoloana ny fivarotamboky tonta eo Ambohijatovo. Ireo faritra misy fanitso sy efa vita fanapotehana ny ao anaty fefy moa dia ny fiantsonan'ny fiara fitaterana Ambohijatovo mitodika mankany amin'ny tonelina Ambanidia sy ny ilany avaratra amin'ny fefy fidirana mankao amin'ny zaridainan' Ambohijatovo. Mampanontany tena moa ity voafefy fanitso farany ity hoe inona no tena tiana apetraka eo satria raha fiantsonan'ny fiara fitaterana vaovao ilay izy dia lasa hatreny amin'ny arabe izany ny olona no miditra ao anaty fiara fa tsy hatreo amin'ny sisindalana. Angamba zavatra hafa no atao eo ankoatra ny hoe niova hevitra amin'ny toerana hametrahana ny fiatsonana vetivety ry zareo.
Ny heverina ho fanamboarana faharoa hita indray dia amin'iny faritra atsimon'ny farihin'Anosy izany. Ny marina kokoa dia ny ampitan'ny lapan'ny fitsarana sy ny manatrika ny foiben'ny fampielezam-peo sy sary an'ny fanjakana (RNM sy TVM). Tarafina ho te-hanitatra ny velaran'ny arabe ry zareo. Nahena be dia be ny sisindalana ho an'ny mpandeha an-tongotra amin'iny ampitan'ny Lapan'ny Fitsarana iny. Ny mpijery ny zavamisy ihany koa dia mahita ny fanalana ireo hazo somary akaiky arabe kokoa amin'ny fiatoana manoloana ny radio Anosy sy ny tsangamby ary heverina fa hanitarana arabe no antony na mety hananganana ilay fiatoana ao anatin'ny tetikasa 119 ihany. Mbola eo am-pandravana ihany koa ny mpikarakara eto fa tsy mbola tafiditra amin'ny fananganana.
Ny fandravana fahatelo hitako kosa indray dia ny eo amin'ny 67ha manoloana ny tranom-piantohana Ny Havana. Efa ho am-bolana sahady izay ny nanesorana ny fiantsonan'ny fiara fitaterana teo ka namindrana azy ireo ho ao 67ha afovoany andrefana ny sasany ary etsy Vassacos Antanimena kosa ny hafa. Ny hita dia nesorina avokoa ny faritra amin'ny sisindalana ka nahatery ny sisa amin'ny arabe. Noheveriko ho hevitra tsara, sady efa nosainiko nialoha ny nalamahana azy, ny fanesorana ny trottoir afovoany noheverina hatrany ho atao zaridaina nefa tsy misy voninkazo na zavamaitso mety vanona loatra teo nefa somary diso fanantenana ihany aho raha mbola averina indray ilay "sisindalana" afovoany nolazaiko teo. Heveriko manko fa mba mampalalaka kokoa ny arabe ny fanesorana tanteraka ireo zaridaina-sisindalana afovoany ireo fa atao toy ny eny Ampefiloha iny izy raha tsy maintsy sasahina ihany ny arabe. Marihana fa ireo faritra telo lazaiko ireo dia
Marihana fa izy telo ireo dia samy eo am-pandravana hatrany fa tsy mbola nahitana fanorenana mihitsy. Lasa ny eritreritra hoe tsy mbola tonga angaha ireo entana na kojakoja kasaina apetraka amin'ireo faritra voatonona ireo no avela hihanjahanja mampalahelo ny tanàna? Sa misy entana indray any ho any andrasana hivoaka hanaovana ny fananganana. Etsy ankilany anefa azo atao ihany koa ny mieritreritra hoe raha vao esorinareo eo aho dia tsy misy tohiny ireo foto-drafitrasa kasaina atsangana fa dia efa potiko aloha ny toerana vitsivitsy, nefa sao dia lasa lavitra loatra indray ny eriteritro.
Fa na dia te-hiresaka momba ny Hetsika nataon'ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana sy ny tao amin'ny Malacam ary ny fihetsiketsehana nataon'i Andry Rajoelina momba ilay jamba mpamaky teny teo amin'ny tohatohabaton'Antaninarenina aza aho (izay tsy tokony hotsinontsinoavina velively araka ny hitako any amin'ny lahatsoratra hafa any) dia aleo asiana hoe hitohy fa tahaka ny lava sahady izany voasoratra izany ka sao monamonaina eo ianareo. Kasa hiakatra eny amin'ny Rovan'i Manjakamiadana ny Asabotsy 6 novambra raha mbola azo asisika ny fandaharam-potoana na dia ho sarotra aza ny hampahalalaka ahy
Jentilisa, 06 novambra 2010 amin'ny 00:30